Chine Pickle Pot Factory and Manufacturers | Chuancheng
Tonga lafatra ho an'ny fandrahoan-tsakafo sy ny fanendrehana toy ny paty, penina, voamaina maina, vary, vary, famoretana, sakafo kely, kafe, dite, voanio na hitahiry ireo zava-maniry tianao indrindra, voankazo sy legioma ary lasanao. Ny fantsom-baravarankely an-dakozia fitaratra dia mahafinaritra ho an'ny fermenting koa.
Ny sakafo voatahiry dia hitoetra vaovao mandritra ny fotoana fohy miaraka amin'ny sarety fiaramanidina misy antsika sy ny hidin-tsolika vita amin'ny silicone. Ny fitaratra mazava dia ahafahanao mahita izay ao anatiny sy ny fivoaran'ny sakafo voatahiry.
Ny siny iray dia vita amin'ny akora misy sakafo, mateza sy azo ampiasaina, madio ary tsy poizina, tsy handratra simika manapoizina ho an'ny sakafo na hanangona tsiro aorian'ny fampiasa matetika.
Lehibe ho an'ny Canning - tonga lafatra amin'ny fitahiry sy ny lazan'ireo mpankafy; ity tavoara fandroana dia noforonina sy refesina ho an'ny tsaramaso mody, peach, peppers, jams, jellies, fiarovana, saosy voatabia, salsa, lasopy ary karazana maro hafa.
Tsara amin'ny fitahirizana - fitehirizana zava-pisakafo madio sy azo ampiasaina amin'ny sakafo sy ny hanina toy ny siramamy, vary, oats, lafarinina, pasta, cookies, crackers, ary vatomamy. Ny fonon'ny metaly fiaramanidina dia mifamatotra amin'ny plastisol tsy misy bpa ho an'ny tombo-kase matevina izay mitazona ny sakafo vaovao sy manitatra ny androm-piainany. Ny jarina dia fitaovana fandrindrana lehibe ihany koa ho an'ny entana manafintoka tianao hotehirizina amin'ny fomba mideza.
Sava tsy tapaka - Ny vava diametatra 2 santimetatra dia manisy moramora voankazo sy legioma toy ny voankazo sy ny voatabia ao anaty siny. Ny fanokafana malalaka dia ahafahana miditra mora foana ao amin'ny siny ho an'ny fanadiovana mora sy madio amin'ny alàlan'ny tanana amin'ny spaonjy.
Kalitao ny fitaratra - vita amin'ny vera-tsara vita amin'ny soda litera avo lenta izay manohitra ny fanorotoroana sy fanimbana. Ny fitakianay dia lovia azo antoka ary azo antoka ny microwave tsy misy sarony. ity tavoahangy fitaratra ity dia sakafo ara-pahasalamana 100% ary maimaim-poana ho an'ny fitahirizana sakafo ara-pahasalamana sy fisotroana zava-pisotro.
Vera mazava - Ny tavoahangy masonitra tsirairay dia vita amin'ny vera madio sy tsy misy fatiantoka hiatrehana ny fambara ambony indrindra azo atao ka ahafahanao mahita mora foana ny atody fandroana ary mamaritra raha voafongana izy ireo. Ireo siny masaka ity ihany koa ny kanadiana tonga lafatra handravaka ny haingo ho an'ny zavakanto sy ny asa tanana, fampakaram-bady sy fety ary tetikasa DIY hafa.
Previous: Tavoahangy tantely
Manaraka: Voahangy latabatra
Tavoahangy tavoahangy misy tavoahangy
Tavoahangy pickle tavoahangy
Glass fitahirizam-bokatra pickle
Fitaovana fitahirizana pickle
Masira sy vera vita amin'ny vera 130ml
Manam-bokotra Abrader Kitchen Grinder Jar Glass Body S ...
Voasary mofomamy na sira shaker
Crystal Candy Jar miaraka amin'ny Lid, Glass Glass St St ...